🥇 ▷ Nokia X5 (5.1 Plus) weli si rasmi ah rasmi ah nooguma imaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhakhso noqoto ✅
Nokia X5 (5.1 Plus) weli si rasmi ah rasmi ah nooguma imaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhakhso noqoto
Iyada oo soosaarka cusub ee Nokia X5 iyo X6 lagu soo bandhigay Shiinaha isbuucyadii ugu dambeeyay, astaanta finnishka ayaa sameysay afka waraabinta taageerayaasha badan ee reer yurub, kuwaas oo jeclaan lahaa inay gacmahooda ku helaan taleefanka casriga ah naqshad xiiso leh, tilmaam dheellitiran iyo qiimo ballan qaad ah (heerka sarrifka). Waxaa jiray hadalo badan oo ku saabsan soosaarista caalamiga ah ee labada aaladaha, laakiin kan Nokia X5 gaar ahaan wuu ahaan karaa wax yar ka dhow.
Si aan u siinno xitaa ka sii xoog badan aragtidan, waxaan u maleyneynay inaan ka yarayn Juho Sarvikas, Sarkaalka ugu sarreeya shirkadda HMD Global oo had iyo jeer si firfircoon ugu shaqeeya barta Twitter-ka, illaa heer uu noqdo meel muhiim u ah qalabka iyo barnaamijyada hal-abuurka leh ee aaladda Nokia. Isaga oo ka jawaabaya isticmaale ku doodayay imaatinka Nokia X5 suuqyada kale ee aan ahayn Shiinaha (kiiskiisa, Hindiya iyo Sri Lanka), Sarvikas wuu ka jawaabayay halkii aan sinnayn.
AKHRISO: Android P DP4 oo laga heli karo OTA oo loogu talagalay Nokia 7 Plus
In kasta oo aan lagu khaldamin waqtiga ama taariikhaha, ayagoo taas ku sheegaya muhiim maahan in baaritaan lagu sameeyo tan, ayaa rabay qaabkeeda si ay u xaqiijiso in soo saarista caalamiga ah ee qalabka su’aal kama taagna. Nalaya, sida ku xusan i xanta, taleefanka casriga ah waxaa loo yeeri karaa Nokia 5.1 Plus waxaana rajeynayaa in ku dhawaaqistu aysan dheeraan doonin. Waxaa laga yaabaa in lagu daro midka Nokia 6.1 Plus, midka loo yaqaan ‘Android One’ ee Nokia X6 xiisaha leh.
Haa, Uma maleynayo inaan u baahan nahay inaan wax ku codeyno tan 😉
– Juho Sarvikas (@sarvikas) July 18, 2018
Dhanka: Adeegga Korantada ee Nokia